Tsamba Dzinobva Kuvaridzi Vedzimba—Kurendesera Zvapupu zvaJehovha
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Batak (Toba) Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Urdu Valencian Vietnamese Yoruba Zapotec (Isthmus)
Tsamba Dzinobva Kuvaridzi Vedzimba
Munguva pfupi ichangobva kupfuura, Zvapupu zvaJehovha zvakapedza basa rekuvaka raifanira kuitwa mumakore 6 rekuwedzera zvimwe zvivako paWatchtower Farms iri muWallkill, kuNew York. Mumakore maviri avakanga vava kupedzisa basa, vakanga vava kumhanyisana nenguva uye paidiwa dzimwe dzimba dzekuti vanhu vaizvipira kuvaka vagare. Saka pakatsvagwa dzimba 25 dzekurenda munzvimbo yakanga iri pedyo.
Varidzi vedzimba vakati kudii nezvekurendesera Zvapupu zvaJehovha dzimba dzavo?
Mumwe muridzi wemba akanyora kuti, “Takagarisana navo zvakanaka chaizvo. Ini nemurume wangu tinogara padivi [neimba yatainge tarendesa], uye taiwirirana chaizvo nevanhu vaigara ipapo.”
Mumwewo muridzi wemba uyo akanga achigara pedyo neimba yaairendesa, akanyora nezvevanhu vaigara pamba pake achiti: “Hatina kumbobvira tanetsana. [Tine] swimming pool iri kuseri kweimba yedu uye taigara tichikoka vakomana vairenda pamba pedu kuti vauye kuzotuhwina. Pese pavaiuya vairatidza kuti vana vane unhu. Tainakidzwa nekuva navo uye tichavasuwa.” Anowedzera kuti: “Hatifi takavakanganwa.”
Mumwe muridzi wemba akati: “Zvaifadza chaizvo kuti vanhu ava vaitirendera vakapedzisira vava shamwari dzedu.”
Vanhu vairenda pavakabuda, varidzi vedzimba vakawana dzimba dzavo dzakaita sei?
“Mari yerendi yaibhadharwa nenguva, imba yacho yaichengetwa zvakanaka [uye] takaiwana ichiratidzika zvakanaka.”
“Tinokutendai pamwe chete nesangano rese reWatchtower nekubata imba yedu zvakanaka,” akadaro mumwe muridzi wemba ambotaurwa munyaya ino. Akaendera mberi achiti haana kumbobvira afungira kuti Zvapupu zvacho zvaizosiya “zvanyatsochenesa” imba yake zvakadaro.
Mumwe mukadzi akati: “Nekuziva kwatinoita kuti sangano renyu rine vanhu vakavimbika, hatina kumbobvira taita kuti vabhadhare mari yedeposit. Pavakabuda, dzimba dzedu dziri mbiri dzairatidzika zvakanaka.”
“Ndingaita sei kuti vesangano renyu vandishandire?” akadaro mumwe muridzi wemba pashure pekunge aona tumwe tunhu twainge twagadziriswa neZvapupu pamba pake. “Pese pamaivimbisa kuti mune basa ramuchauya kuzoita, maisvika nenguva. Vamwe vanhu vanombondiitira mabasa akadaro havaiti zvavanenge vavimbisa.”
Mashoko Avo Ekupedzisira
Chibvumirano chekurenda imwe imba pachakanga chava kunopera, muridzi wemba yacho akanyora kuti kudai Zvapupu zvaizoti zviri kuda kuti tiite chimwe chibvumirano chekuti varambe vachirenda imba yacho, ndaizovadzikisira rendi.
Mumwe akati: “Tinoda kuti veWatchtower vazotirendera zvakare kana pakamukazve mumwe mukana.”